Silicone Rubber -saareyaasha - Shiinaha Silicone Rubber Factory & Shirkado cusub
Platinum Cured Silicone Rubber HTV caag silikoon ah
Hordhaca alaabta 1. Darajada: HCR Molding Raw Silicone Rubber Material 2. Adkeysiga: Laga soo bilaabo 15-80 Shore A engegnaan 3. Shahaadada: ISO9001, SGS, ROHS Maxaad u doorataa caagaga silikoon ee qaaliga ah Waxaan u isticmaalnay silica qaloocan FST-430 sidii buuxiye ilaa caag silikoon ah. Sida laga yaabo inaad ogaato silicayada la qiijiyay ayaa ah faa'iidadeena weyn, taas oo beddeli karta Aerosil. Our FST-430 ma aha oo kaliya muujinta daahfurnaanta aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa sifooyin farsamo oo aad u fiican. Astaamaha Muhiimka ah xasiloonida kuleylka sare ...
Cuntada iyo darajada caafimaadka HTV silikoon silikoon ah
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Faa'iidadeena Waxaan u isticmaalnay silica qaaliga ah FST-430 sidii buuxiyaha caag silikoon ah. Sida laga yaabo inaad ogaato silicayada la qiijiyay ayaa ah faa'iidadeena weyn, taas oo beddeli karta Aerosil. Our FST-430 ma aha oo kaliya muujinta daahfurnaanta aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa sifooyin farsamo oo aad u fiican. Tilmaamaha Alaabta Resistance t ...
Iska -caabinta Jeebka Sare ee Fiber Silicone Rubber HTV Silicon Rubber Raw Material
Faa'iidooyinka Wax -soo -saarka 1. Heerkulka Sare: Silicone caag heerkulka lagu dabaqi karo -50 ° C ilaa 250 ° C, waxaa loo adeegsan karaa microwave -ka iyo foornada. 2.Easy si loo nadiifiyo: Alaabada silikooniga ah ee la dhammeeyay waxay u baahan yihiin biyo si ay nadiifinta u sameeyaan. 3.Loon Life: Silicone caag deggan ee guryaha kiimikada. 4.Soft iyo Raaxo leh: Ka faa'iideyso jilicsanaanta caagga silikoon, alaab wax ku dhejinta taabasho raaxo leh, aad u dabacsan oo aan isbeddelin 5.En environmentally Friendly: Silicone caag ma soo saaro oo sun ama halis ...